Archive du 20180731
Monja Roindefo Manahy korontana amin’ny fifidianana
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany ny antoko Monima tarihin’i Monja Roindefo eo anatrehan’ny hanatanterahana ny fifidianana eto amin’ny firenena afaka volana vitsy.
Andry Rajoelina Gidragidra vao nahazo ny “Palais des sports”
Saika tsy nahazo ny Lapan’ny Kolontsaina tetsy Mahamasina i Andry Rajoelina, izay hamory vahoaka eny an-toerana rahampitso tolakandro, raha ny vaovao azo.
Manamafy ireo depiote TIM Ravalomanana no hanavotra ny firenena
Nidina ifotony tany Soavinandriana ny depite Tiako I Madagasikara (TIM) ho an’ny fanovana nitondra ny hafatry ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, nanamafy ny haha kandida azy hofidiana filoham-pirenena amin’ity 2018 izy, ary vonona hanavotra ny firenena izay latsaka ao anaty kizo.
Maherifon’ny firenena Notsiahivina manokana
Daty tsy azo kosehina amin`ny tantaram-pirenena ny datin`ny 30 jolay 1978.
Hasin’ny filohan’ny repoblika Malagasy Latsaka ambany be
Izay be resaka sy sahisahy miseho vahoaka ankehitriny dia alaim-panahy hilatsaka ho filoham-pirenena avokoa ary sahy manambara fa ho kandida.
Ahiahina famotsiam-bola Hohadihadiana ny Pastera Mailhol ?
Re hatry ny omaly fa mety hanokatra fanadihadiana momba ny Pasteur Mailhol izay kandida filoham-pirenena atolotry ny “Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara » ny SAMIFIN na ny sampandraharaha Malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola.
Kandida filoham-pirenena Misy manana an’arivony miliara…
Marina fa eo ny hevitra sy ny vina hoenti-mandresy lahatra ny vahoaka fa rehefa tsy misy ny vola hoenti-mihetsika amin’ny fifidianana eto amintsika, dia hiditra ao anatin’ny klioban’ny kandida mpibata 0% mahery kely.
Politikam-panjanahana efa fahagola Voakorontana izay filoha tsy ao anaty kajy
Efa misy drafitra vita mialoha tany amin’ny fanjanahantany momba ny fitantanana an’i Madagasikara, ary misy sojakin’olona efa natokana hanao an’io araka ny fifanarahana miafina tany aloha tany.
Lalàna mifehy ny fifidianana Diso tetika ny HVM
Mipoitra avokoa ireo kandidà azo heverina fa ho “favori” amin`ny fifidianana manaraka. Efa mitety faritra hatrany ireo handray anjara na dia misy aza ireo tsy nanao fanambarana ofisialy.
Toe-bolan’ny CUA Miha salama hatrany, hoy i Neny
Salama ary miha salama hatrany ny toe-bolan’ny Kaominina Antananarivo (CUA), hoy ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, omaly, tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely,
Mpampianatra mitokona Tezitra amin’ny ataon’ny TVM
Nanatanteraka hetsika tetsy amin’ny ofisin’ny haino aman-jerim-panjakana (ORTM) tetsy Anosy ny mpampianatra mpitokona omaly. Nisy ny lainga sy famitahana nataon’ny TVM araka ny nambaran’izy ireo.
Hand-ball faha-55 taonan’ny ASSM Raikitra ny “Tournoi Frère Fazio & Mohamed Salah”
Ho fanombohana ny fanamarihana ny faha-55 taonan’ny ASSM Amparibe Hand-ball dia tanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano mandritra ny hadimiana 30 jolay-03 aogositra 2018 ny fifaninanana “Tournoi Frère Fazio & Mohamed Salah” handraisana ekipa katita 12-15 taona, Assm, Ac Select, Ascaf Tanà, Mayotte (zazalahy) sy Acbd, 119 Tiroanomandidy, Hbca,
COSAFA CUP U 17 2018
Nobatain’ny ekipam-pirenen’i Angola tamin’ny alahady 29 jolay 2018 teo tao amin’ny kianja St François-Xavier ao Port Louis Maurice ny amboaran’ny Cosafa Cup 2018 sokajy U 17.
Arakaraka ny hitsikerana ny hafa no toa maka fanahy ny sasany hanondrana indray. Efa hiaraha-mahalala fa tsy milamina ny tany. Misavorovoro ny tany.
Lycée Moderne Ampefiloha Mpampianatra 46 amin’ireo 165 no tonga niasa
Mpampianatra 46 amin’ireo 165 isa misy ao an-toerana no tonga nampianatra tetsy amin’ny Lycée Moderne Ampefiloha (LMA), omaly.
Zimbabwe Amin’ny 4 aogositra ny voka-pifidianana
Ny sabotsy 4 aogositra izao farafahatarany no ho fantatra ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena notanterahana tatsy Zimbabwe omaly alatsinainy 30 jolay.
Orinasa mitrandraka fasimainty any Toliara Mandeha ny fifandresen-dahatra amin’ny mpanjono
Misy ny fitrandrahana fasimainty ataon’ny orinasa Toliara sands, izay efa lasa Base Resources ny anarany amin’izao, ary efa nisy ny dingana vita.
Fambolem-bary eto Madagasikara Mila mampiasa ny teknika manaraka ny toetrandro
Manafatra vary fotsy 200 000 taonina eo i Madagasikara isan-taona. Izany hoe raha mampiakatra voka-bary ny Malagasy ka mahatratra 500 000 taonina amin’ity taona dia efa tratra ny filana ary misy ambim-bava.